कृष्णदासजी बलात्कार आरोपमा ट्वीस्ट : महिलाको एकतर्फी म्यासेज, ‘तपाईलाई चुम्न मन छ’
कृष्णदासजी बलात्कार आरोपमा ट्वीस्ट : महिलाको एकतर्फी म्यासेज, ‘तपाईलाई चुम्न मन छ’
काठमाडौं । बलात्कारको आरोप लागेका सिद्धबाबा कृष्णदासजी महाराजको घटनामा ट्वीस्ट देखिएको छ । बलात्कारको आरोप लगाउने महिलाले उनलाई ५२ पेज म्यासेज पठाएको खुलेको छ ।
ती महिलाले म्यासेजमा लेखेकी छिन्, ‘एकचोटि भेट्न पाए नि हुन्थ्यो, कति चुम्न मन छ । के यो झुटो हो ? हजुरको मनमा टोलाउँदा आफैं मुस्कुराउँछन् यी ओठ, के यो नाटक हो ?’
ती महिलाले आफूलाई कृष्णदासजीले कात्तिक ४ गते बलात्कार गरेको आरोप लगाएकी छिन् ।
तर ती महिलाले विगत ६ महिनादेखि सिद्धबाबालाई पटक पटक गरेको च्याट निकाल्दा ५२ पेज पुगेको छ । च्याटमा उनले एकोहोरो प्रेम दर्शाएकी छिन् । पटक पटकको कोसिस असफल भएपछि बलात्कारको आरोप लगाएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । ‘या त महिलाले बलात्कारको आरोपमा फँसाउन उत्तेजित बनाएको हुनसक्छ,’ स्रोत भन्छ ।
ती महिलाले ६ महिनादेखि यसरी निरन्तर म्यासेज गरे पनि सिद्धबाबाले भने कुनै रिप्लाई गरेको देखिँदैन ।
महिलाले पठाएको च्याटमध्ये एक ठाउँमा लेखिएको छ, ‘जय सिताराम हे प्राणनाथ जुन चरण चुम्न यो मन आतुर छ, ती कोमल चरणमा कोटी कोटी नमन, कसम खाएर नी लेखेसी भन्ने सोचिसिन्छ होला । जे सजाय पनि भोग्न तयार छु । हजुरको मन त मेरो लागि कठोर छ । तर म हजुरलाई पाउन तड्पिरहेको छु । मेरो मनको पीडा हजुरलाई के थाहा ? हे प्यारा हजुरको यादमा जुन तरंगले मलाई छुन्छ के यो झुटो हो ररु हजुरको अंगालोमा बेरिएर संसार भुल्न मन छ। थोरै माया बर्साए कस्तो हुन्थ्यो होला ?’
उनले थप लेखेकी छिन्, ‘एकचोटि भेट्न पाए नि हुन्थ्यो, कति चुम्न मन छ। के यो झुटो होरु हजुरको मनमा टोलाउँदा आफैं मुस्कुराउँछन् यी ओठ, के यो नाटक हो ?’ तर सिद्धबाबाले कुनै उत्तर दिएको भने देखिँदैन ।
यसरी विगत ६ महिनादेखि सिद्धबाबालाई निरन्तर म्यासेज गरेर भेट्न र चुम्न अनुनय, विनय गर्ने ती महिलाले नै सिद्धबाबाविरुद्ध बलात्कारको उजुरी दिएकी हुन् ।
यस्ता छन्, महिलाले कृष्णदासजीलाई फेसबुकबाट पठाएका एकतर्फी म्यासेजहरु (फोटोहरु)
कृष्णदासजी महाराजमाथि बलात्कारको आरोप
(नोट : यसअघि भुलवश पक्राउ परेको भनिएकोमा सच्याइएको छ ।)
100 प्रतिशत यो कुरा झुट हो । यो साधु सन्त लाई फसाउने काम मात्रै हो । यो आइमाईलाई पाप लाग्ने छ । यस्तो साधु लाई फसाउने । धर्म को रक्षा गर्ने मान्छे हरु लाई मार्ने फसाउने खोज्ने त आज कल सानो कुरा भएको छ ।